Ukuxhamazela kungaholela abafundi eweni - Bayede News
Home » Ukuxhamazela kungaholela abafundi eweni
“Sizosebenza kanzima ukwenza isiqiniseko sokuthi sivikela abafundi, othisha nezisebenzi ezikoleni ukwenza isiqiniseko sokuthi siyalwa nokhuvethe,”
Lo mbhalo ongenhla ngamazwi aphinyiswa nguNkk u-Angie Motshekga onguNgqongqoshe woMnyango Wezemfundo Eyisisekelo. Lo Mnyango ukhipha lesi sitatimende nje yingoba kuvele ukwanda kokwesuleleka kwabafundi nothisha ezikoleni ngokhuvethe.
Ukuvulwa kwezikole kwaqala mhla lulunye kuNhlangulana, kwabuyela abafundi bebangala lesi-7 nabele-12 lokho kwenzeka ngaphansi kwezinga lesithathu lemvalelwakhaya.
UNkk uMotshekga ememezela ukuthi kuzobuyelwa ezikoleni baningi abajabula ikakhulukazi abenza uMatikuletsheni kodwa kwakhona abangasamukelanga lesi sinqumo ikakhulukazi abazali bezingane.
Okwenza bajabule abafundi ingoba babefuna ukuthi baqede ngalo nyaka, bese ngonyaka ozayo baye emanyuvesi nabo baqale balungise impilo yabo eya empumelelweni.
Yize kunjalo iqiniso lithi lesi sinqumo sokubuyela ezikoleni asilungile neze. Okwenza lokho ukuthi endleni uma izingane ziya esikoleni zihamba zingamaqulu, akukho ukuqhelelana.
Uma oyedwa enalo ukhuvethe kwabali-10, kusho ukuthi basuke sebethelelekile ngoba bahamba bekhuluma okusho ukuthi isifonyo sisuke siseceleni. Lokhu kusho ukwanda kwamathuba okusabalala kwalolu bhubhane.
Njengoba lo Mnyango uthi ufuna kwandiswe amabanga avulwayo ngoMsombuluko, umbuzo uthi ngeke yini kwande isibalo sabanaleli gciwane?
Kusukela kuvuliwe miningi imibiko esiphumile ngabafundi, othisha nezisebenzi asebethelelekile. Esinye sezikole esibe sematheni iMakaula Senior Secondary School, esiKwaBhaca e-Eastern Cape kwatholaka abantu abangama-24 abahaqwe ukhuvethe.
Kodwa ngokwezinhlelo zoMnyango kuhlelwe ukuthi ngoMsombuluko kuvulwe ibanga lesi-3, elesi-6, ele-10 kanye nele-11.
Okufanele kuqashelwe ngalezi zinqumo zemfundo ngukuthi singajahi imfundo nokuqeda unyaka wezemfundo sikhohlwe impilo yabantu. Iqiniso lithi yebo iningi labantu liyibuka njengesikhali sokulwa nobubha imfundo kodwa umbuzo uthi uzolwa kanjani nobubha usungasekho emhlabeni ngenxa yokubulawa yilesi sifo, uzolwa kanjani nobubha obuhlasele umndeni wakho wena usungasekho emhlabeni, uyoqhosha kanjani ngemfundo yakho ungasekho?
Uma izibalo zanda zabantu abanaleli gciwane usuzihlehlisa ezentsha noma abafundi kubeka isithombe sokuthi ukuzivikela kuleli gciwane sekubahlulile abadala kodwa ngenxa yokuxhamazela sekukhishwa isinqumo sokuthi izingane aziye ezikoleni, uma kuhluleka omdala omncane yena uyini kuleli gciwane.
UMnyango uthathe izingane wathi azibuyele ezikoleni kepha imihlangano yePhalamende, eyamalungu ePhalamende neyabantu iyagqugquzelwa ukuba ibanjwe nge-inthanethi okusho khona ukuthi kwawona lo Mnyango leli gciwane uyalisaba kodwa uthumela izingane emnyango.
Yebo uNgqongqoshe wakubeka kwacaca ukuthi uma umzali engathandi ukuyisa ingane yakhe esikoleni akaphoqiwe kodwa lokhu kufana nokununusela igundwane ngoshizi ulindele ukuthi ngeke liwudle ube wazi kahle ukuthi lokhu ngukudla okuyintandokazi kulo.
Isibonele nje salokhu ngukuthi aboHlanga iningi labo lithembele kuyona imfundo ukuba babe wutho kusasa ngakho umzali kuyamuphoqa ukuba ayise ingane yakhe esikoleni ngoba ethi wenzela yona ukuba ingahlali osizini yena akhula noma asahlala kulo ngenxa yokungafundi.
Ukuxhamazela okukhulu kuvele emuva kokuvunyelwa kwamanye amabanga ukuba abuyele ezikoleni okushiya umbuzo othi uma amabanga amabili okungelesi-7 kanye nele-12 evulile ehlulekile ukuvimba ukwanda kwaleli gciwane uma sekufakwa amanye phezu kwawo kuchazani lokho kubafundi, kuchazeni ngekusasa lentsha yaleli lizwe ngoba iqiniso lithi intsha yezwe le engabafundi iyikusasa lezwe kodwa uma isiphenduka umhlatshelo izwe liyosala nqunu ngoba abaholi balo bakusasa bayobe sebasala enkundleni njengoba izwe lisahlaselwe ukhuvethe.
Okunye okungakhulunywa ngalesi sinqumo esinikwe umzali ngokuvuma ukuthi izingane zibuyele ezikoleni ngukuthi sithinta kakhulu aboHlanga. Lokhu ngikusho ngenxa yokuthi izingane eziningi zaboHlanga zqhamuka emindenini ehlaselwe wububha okwenza uma ethi umzali ingane ayihlale ekhaya ngeke ikwazi ukufunda yona nge-inthanethi ngenxa yesimo somnotho okubeka ngokusobala ukuthi lesi senzo soMnyango sokunikeza abazali ilungelo lokuthatha lesi sinqumo basale beba yizitha ezinganeni zabo ebezithanda ukufunda ngisho isimo sisesibi kanje.
Imfundo ingokuningi kepha umphefumulo womuntu uyikho konke, akungaxhanyazelwa uma kwenziwa izinqumo mayelana nempilo yabantu.
Anathi Mtaka Jul 6, 2020